ShweMinThar: လမ်းသရဲမုန့် - ဘာလီကြက်သားပေါင်း - ကြက်ပေါင်းကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ - ရတနာရှစ်မျိုးဆန်ပြုတ်
လမ်းသရဲမုန့် - ဘာလီကြက်သားပေါင်း - ကြက်ပေါင်းကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ - ရတနာရှစ်မျိုးဆန်ပြုတ်
မုန့်ရေပါး (သို့) လမ်းသရဲမုန့် (သို့) ရေမုန့်
မွှေးဂျုံမှုန့် - ½ ထုပ် ( ၇၅ ဂရမ်)
မွှေးကော်မှုန့် - ၈၀ ဂရမ်
တဆေး (ရိစ်) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ၁/၂ ဇွန်း
ရေ - ၃၂၀ မီလီလီတာ +၂၄၀ မီလီလီတာ
ဘိတ်ကင်ပေါင်ဒါ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ခရမ်းချဉ်သီး - ၂လုံး (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ငရုတ်သီးစိမ်း - ၅-၆ တောင့် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ကြက်သွန်မြိတ် - ၅ ပင် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
စားတောာ်ပဲပြုတ် - စားပွဲဇွန်း ၁၀ ဇွန်း
ကြိုက်နှစ်သက်ပါက အရသာမှုန့်လည်း ထည့်နိုင်ပါတယ်။
1. မုန့်နှစ်ဖျော်ဖို့အတွက် ဇလုံကြီးတစ်လုံးထဲကို ဆန်မှုန့်၊ ဂျုံမှုန့်၊ ကော်မှုန့်နဲ့ တဆေးထည့်ပြီး မွှေပါ။
2. ပြီးလျှင် ရေ ၃၂၀ မီလီလီတာ ထည့်ပြီး မုန့်နှစ်ဖျော်ပါ။ ပြီးလျှင် အဖုံးဖုံးပြီး ၂-၃ နာရီခန့် နှပ်ထားပါ။
3. မုန့်နှစ်အမြုပ်ထလာပါက Baking powder ကို ရေ ၂၄၀ မီလီလီတာထည့်မွှေပြီး မုန့်နှစ်ထဲထည့်ပါ။ မွှေပေးပါ။
4. မကပ်တဲ့ဒယ်အိုးကို မီးဖိုပေါ်တင်ပါ။ မီးမပြင်းပါစေနဲ့။
5. မုန့်ရေကျဲကျဲကို မုန့်တစ်ခုစာထည့်ပြီး ဖြန့်ပါ။
6. မုန့်ကျက်ခါနီးမှာ မုန့်အနားကို ဆီသုတ်ပေးပါ။ ( ဆိုင်တော်တော်များများမှာ ဆီအများကြီးထည့်ကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အနည်းငယ်ပဲထည့်ပါတယ်)
7. ခွက်အသေးထဲကို အဆာစုံအောင်ထည့်ပြီး ဆားအနည်းငယ်ထည့်နယ်ပါ။ ပြီးနောက်မုန့်ပေါ်မှာဖြန့်ပြီး ထည့်ပါ။ အဆာကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ။ မုန့်ရေပါးကို တချို့က ကြွပ်နေအောင်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်ပြီးကြွပ်တာကို မကြိုက်ပါဘူး။ တကယ့်မုန့်ရေပါးက ပျော့ပြီး အိနေရမှာပါ။
ခေါက်မုန့်လုပ်မယ်ဆိုပါက…..အထက်ပါအချိုးအစားအတိုင်း မုန့်နှစ်ဖျော်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ အချိုအရသာအတွက် ထန်းလျက်ရည်ပျစ်ပျစ်ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
ခေါက်ဆွဲကတော့ မကြိုက်တဲ့ ကလေး အတော်ရှားမှာပါနော်။ ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့ အစားအစာတွေက ကလေးတွေကို သန်မာထွားကျိုင်းစေတာမို့ ကလေးတို့စားသင့်တဲ့အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ ကော်ရည်ချိုချိုမွှေးမွှေးလေးကတော့ အာဟာရစုံအောင် ချက်ထားတာမို့ တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ကလေးတွေအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ကြက်ရိုးပြုတ်ရည် - ၁ လီတာ
ကြက်ပေါင် - ၂ ခု
ကြက်ဥ - ၁ လုံး (ခလောက်ထား)
ပြောင်းကော်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
သကြား - ထမင်းစားဇွန်း ၁/၃ ဇွန်း
ခရုဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
ဂျပန်ပဲငံပြာရည်အကြည် - ထမင်းစားဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
တရုတ်မဆလာ - အနည်းငယ်
ကြက်သွန်ဖြူ - ၅ မြွှာ
ကြွက်နားရွက်မှို - လက်တစ်ဆုပ်စာ (ရေနွေးစိမ်လှီးဖြတ်ထား)
ကြက်ဥခေါက်ဆွဲ - ရေနွေးဆူဆူမှာပြုတ်ပြီး ရေစစ်ထားပါ
၁။ ကြက်ပေါင်ကို ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ တရုတ်မဆလာ၊ ခရုဆီ၊ ဂျပန်ပဲငံပြာရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း ခြစ်ပြီး အရည်ညှစ်ကာ ထည့်နယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ တစ်ညထည့်နှပ်ထားပါ။
၂။ နှပ်ထားတဲ့ကြက်သားကို ကြက်ရိုးပြုတ်ရည်ထည့်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ပြုတ်ကာ အသားနူးလာလျှင် ဆယ်ယူထားပါ။
၃။ ကြက်ပြုတ်ထားတဲ့ရေထဲ သကြားထည့်ပါ။ အပေါ့၊ အငန်၊ အချိုကို လိုသလိုပြင်ပြီး ကြွက်နားရွက်မှို ထည့်ပါ။ ကြွက်နားရွက်နူးလျှင် ကော်မှုန့်ကို အရည်ဖျော်ထည့်ပါ။ထို့နောက် ကြက်ဥခလောက်ထားတာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထည့်မွှေပါ။ မွှေလျှင် တစ်ဖက်တည်းကို မွှေပေးပါ။ ကြက်ဥကိုလည်း တစ်ခါတည်းမထည့်ဘဲ ဖြည်းဖြည်း ချင်း ထည့်နေစဉ် လက်တစ်ဖက်က မွှေပါ။ ၃ မိနစ်ခန့်ဆိုလျှင် မီးပိတ်ပြီး ခေါက်ဆွဲပြင် ထားတဲ့အပေါ် ဟင်းရည်ကိုလောင်းထည့်ကာ ပွဲပြင်ပေးပါ။
လူကြီးအတွက်ကတော့ ငါးပိအရည်ဖျော် အချဉ်လေးညှစ်ပြီး သုံးဆောင်လို့ရတာမို့ ကလေးအတွက်သာမက လူကြီးတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေပါတယ်နော်။
<<<ရတနာရှစ်မျိုးဆန်ပြုတ် (Eight Treasures Porridge) 八宝粥 (bā băo zhōu)>>>
တရုတ်လို ရတနာရှစ်မျိုး ဆန်ပြုတ်လို့ ခေါ်တဲ့ နှစ်သစ်ကူး အစားအစာ ဆန်ပြုတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးအခါမှာ လာဘ်လာဘပေါများ ကြွယ်ဝစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ ချက်ပြီးစားလေ့ရှိပါတယ်။ ရတနာရှစ်မျိုးရယ်လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်း ဆန်နဲ့ပဲအမျိုးပေါင်း ရှစ်မျိုးနှင့်အတူ နှစ်သက်ရာ သစ်သီးခြောက်တို့ဖြင့် ပေါင်းပြီးချက်ထားတဲ့ ဆန်ပြုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ချက်စားကြည့်ရအောင်နော်…။
ဆန် – ၁/၂ ခွက် (ဆန်ချိန်ခွက် )
ဆန်ညို – ၁/၂ ခွက်
ကောက်ညှင်းဆန် – လက်တစ်ဆုပ်
တရုတ်ဘာလီစေ့ (လုကူမီ) – ၁/၂ ခွက်
ပဲစင်းငုံ – လက်တစ်ဆုပ်
မတ်ပဲ – လက်တစ်ဆုပ်
ပဲကြား – လက်တစ်ဆုပ်
ပဲပြင်းစေ့ – လက်တစ်ဆုပ်
သကြားခဲ (Rock Sugar)
ဆော်ဒါ – အနည်းငယ်
၁။ ပဲအမျိုးမျိုးကို တစ်ညကြို၍ ရေဆေးပြီး ရေစိမ်ထားပါ။
၂။ ဆန် ၃ မျိုးကို ၂ နာရီခန့် ရေစိမ်ထားပါ။ ကြာစေ့နှင့် ဆီးသီးခြောက်ကိုလည်း ရေစိမ်ထားပါ။
၃။ အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပါက အိုးတစ်အိုးထဲ ရောထည့်ပြီး ရေမြုပ်အောင် ထည့်တည်ပေးပါ။ ပေါင်းအိုး ဖြင့် အဖုံးအနည်းငယ်ဟပြီးလည်း တည်နိုင်ပါတယ်။ ရေခန်းသွားပါက ရေ အနည်းငယ်စီထည့်ပြီး မကြာခဏ မွှေပေးပါ။ ကောက်ညှင်းကြေသွားပါက အိုးကပ်တတ်ပါတယ်။
၄။ ပဲများနူးအိလာပါက ဆားနှင့် ဆော်ဒါ ထည့်ပေးပါ။
၅။ သကြားခဲထည့်ပြီး အပျစ်အကျဲကို မိမိနှစ်သက်သလို ပြုပြင်၍ တည်ခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
* ပဲအမျိုးမျိုးမှာ မိမိနှစ်သက်ရာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
* သကြားခဲမထည့်ဘဲ အငန်အဖြစ်လည်း တည်ခင်းနိုင်ပါတယ်။
ချက်ပြုတ်ပြသူ - Sofia
<<<ဘာလီကြက်သားပေါင်း (Steamed Barley Chicken)>>>
ပန်းသေးရိုးရာအစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မိတ်ဆုံစားပွဲနှင့် ဧည့်ခံပွဲတို့မှာ တည်ခင်းလေ့ရှိတဲ့ ဘာလီစေ့ကြက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ စားရတာ အရသာရှိပြီး ဟင်းပွဲအဖြစ် တည်ခင်းနိုင်သလို အဆာပြေစာအဖြစ်လည်း တည်ခင်းနိုင်ပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်…။
ပါဝင်ပစ္စည်း ၄ ပွဲ
တရုတ်ဘာလီစေ့ (လုကူမီ) – ၂၅၀ ဂရမ်
ကောက်ညှင်းဆန် – ၅၀ ဂရမ်
ရှီတာခီမှိုခြောက်/အစို – ၅၀ ဂရမ်
ကြက်သား/ အမဲသား – ၅၀ဝ ဂရမ်
ပဲစိမ်းလုံး – ၁၀ဝ ဂရမ်
ပဲငံပြာရည်အကြည် – ၃ ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် အနောက် – ၁ ဇွန်း (ဥစအငသညေူ)
နှမ်းဆီမွှေး – ၁ ဇွန်း
တရုတ်ငါးမျိုးမဆလာ – ၁ ဇွန်း
ဟင်းခတ်မှုန့် – အနည်းငယ်
၁။ ဦးစွာ ကောက်ညှင်းဆန်နှင့် ဘာလီစေ့တို့ကို သီးသန့်စီ ၃ နာရီခန့် ရေစိမ်ထားပါ။
၂။ မှိုခြောက်ကိုလည်း ရေဆေးပြီး ရေနွေးဖြင့် ပျော့အောင်စိမ်ထားပါ။
၃။ ကြက်သားကို ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ခရုဆီ၊ နှမ်းဆီမွှေးနှင့် တရုတ်မဆလာ ၁ ဇွန်းထည့်၍ သမအောင်နယ်နှပ်ပြီး ပေါင်းထားပါ။
၄။ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ ထောင်းထားပါ။
၅။ ရေစိမ်ထားသောမှိုကို ရိုးတံဖယ်ပြီး ပါးပါးစိတ်ထားပါ။ အပွင့်လိုက် အနည်းငယ် ချန်ထားပါ။
၆။ အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပါက ဘာလီစေ့ကို ရေထည့်ပြီး နူးအောင်ပြုတ်ထားပါ။ ရေခန်းခါနီးမှာ ကောက်ညှင်းကို ရောချက်ပါ။ ကျက်လျှင် မီးပိတ်ထားပါ။
၇။ ဒယ်အိုးတစ်လုံးကို အပူပေး၍ ဆီထည့်ပြီး ချင်းနှင့် ကြက်သွန်ကို ဆီသတ်ကာ လှီးထားသောမှိုကို ထည့်ပါ။ ပဲစိမ်းလုံးထည့်ကြော်ပါ။
၈။ ပြီးလျှင် အသင့်ချက်ထားသော ဘာလီစေ့တို့ကို ထည့်၍ အထက်အောက်လှန်ပြီး ကြော်ပါ။
၉။ ပဲငံပြာရည်အကြည်/အနောက်၊ တရုတ်မဆလာနှင့် ဆားအနည်းငယ် ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေးပါ။ ပေါင်းထားသော ကြက်သားအနည်းငယ် ရောထည့်ပါ။ အရသာအပေါ့အငန်မြည်းပြီး ပွဲပြင်ရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
၁၀။ ပန်းကန်လုံးကြီးကြီးအောက်ခြေမှာ ချန်ထားတဲ့ မှိုတစ်ပွင့် အလယ်မှထည့်ပါ။ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ ကြက်သားများကို ခပ်ပါးပါးလှီးပြီး စီထည့်ပါ။
၁၁။ အပေါ်မှာ ကြော်ထားသော ဘာလီအရောကိုထည့်၍ အနည်းငယ်ဖိပေးကာ ပေါင်းအိုးကို အပူပေးပြီး ၁၀ မိနစ် ခန့် ပေါင်းပါ။
၁၂။ တည်ခင်းမည့်အချိန်မှသာ ပန်းကန်ပြားထဲ ပေါင်းထားသော ဘာလီကြက်ပေါင်းကို မှောက်ထည့်ပေးပြီး တည်ခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။